Wararka Maanta: Arbaco, Jan 23, 2013-Mas'uuliyiin ka tirsan Urur siyaasadeedka HORSEED ee Puntland oo Degmada Boosaaso kula kulmay Ardayda Jaamacadaha
Ujeedada ugu weyn ee kulanka ayaa ahayd sidii dhalinyarada loogu boorrin lahaa ka qayb qaadashada geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo hirgelinta hannaaka siyaasadeed ee axsaabta badan.
Waxaana mas'uuliyiintii kasoo qayb galay kamid ahaa: wasiir ku-xigeenka amniga, wasiirka gaadiidka iyo howlaha guud, wasiir ku-xigeenka deegaanka iyo duur-joogta iyo weliba labada guddoomiye ee gobollada Bari iyo Sanaag.
Mas'uuliyiintan oo intooda badani ay goobta ka hadleen, ayaa dhalinyarada u sheegay in ay iyagu yihiin furaha horumarka bulshada, loona baahan yahay in taageero hagar la'aaneed laga helo, ayna muhiim tahay inay ka qayb qaataan xoojinta ammaanka iyo horumarka dalka.
Dhalinyarada ayaa iyaguna dhankooda ballan qaaday in ay kaalintooda kasoo dhalaali doonaan, aadna ay u taageersan yihiin geeddi-socodka dimuqraadiyadda Puntland, maadaama uu meesha ka saarayo nidaamkii qabiilka ku saleysnaa ee horay loogu dhaqmi jirey.
Sanadkii lasoo dhaafay waxaa Puntland looga dhawaaqay ku dhowaad 9 urur-siyaasadeed, waxaase shuruudaha guddiga doorashooyinku ay ku xireen soo buuxiyey 6 urur oo kala ah: Horseed(xisbul xaakimka), Hor-cad (horumar iyo cadaalad) , Midnimo, EDP(ururka dimuqraadiyadda Puntland), Wadajir iyo UDAD(ururka dadka Puntland.